Nahazo tsiron'i Seychelles izao i Alemaina tamin'ny hetsika ara-batana voalohany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Nahazo tsiron'i Seychelles izao i Alemaina tamin'ny hetsika ara-batana voalohany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Travel Wire News
Ny tsiron'i Seychelles any Alemaina
Miaraka amin'ny Constance Hotels, Raffles Seychelles, ary Condor Airlines, Seychelles fizahan-tany dia nampiantrano hetsika fiaraha-misakafo tao Francfort ho an'ny mpiara-miombon'antoka ara-barotra sy media. Ny hetsika dia namorona sehatra hanamafisana ny fahatokisan'ireo mpandraharaha fitsangatsanganana amin'ny fivarotana ny toerana haleha sy ny fanavaozana ny mpanatrika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
Mba hampitomboana ny fahitana ny toerana haleha, indrindra amin'ny mpiara-miombon'antoka ara-barotra sy ny haino aman-jery, ary ny fitazonana ny paradisa madio ao an-tsain'ny varotra fitsangatsanganana alemana, dia nanatrika fampisehoana an-dalambe Expipoint tamin'ny Novambra ihany koa ny ekipan'ny Tourism Seychelles any Alemaina.
Ny fampisehoana an-dalambe dia anisan'ireo hetsika ara-batana voalohany naverina tamin'ny tsena Alemana. Nasehon'ny solontenan'ny Tourism Seychelles any Alemaina sy Aotrisy, Atoa Christian Zerbian, any amin'ny tanàna telo alemà, Berlin, Hannover ary Cologne ny toerana haleha.
Miaraka amin'ireo fampirantiana hafa toy ny toerana, mpiara-miombon'antoka amin'ny hotely ary zotram-piaramanidina Nasehon'ny fizahan-tany Seychelles ny mahasarika ny nosy, mikendry ireo mety hanao fialan-tsasatra amin'ny vanim-potoana ririnina ary miomana amin'ny fahatongavan'ny taona vaovao.
Seychelles dia manolotra traikefa fitsangatsanganana tsy misy adin-tsaina raha ampitahaina amin'ireo toerana hafa izay manana fepetra henjana hidirana, toy ny fanagadrana tsy maintsy atao rehefa tonga na mamerina ny fitiliana PCR rehefa afaka andro vitsivitsy.
Mampiseho famantarana miavaka amin'ny fiverenan'ny indostrian'ny fizahantany, Seychelles dia nandrakitra mpitsidika 146,721 ho an'ny vanim-potoana 1 Janoary ka hatramin'ny 14 Novambra 2021.
Miaraka amin'ny mpitsidika 14,090 voarakitra an-tsoratra hatramin'izao, Alemana dia tafiditra ao anatin'ireo tsena telo lehibe indrindra manerantany ho an'i Seychelles amin'ity taona ity.